Zvapupu zvaJehovha zvokuEstonia: “Tinodzidza Pane Zvakaitika Kare”
Mufaro Unobva Pakupa Vamwe Zvipo
Nguva Yokumboonana Semhuri
Vakawana Chimwe Chinhu Chiri Nani Kupfuura Krisimasi
Ndakazowana Rusununguko Rwechokwadi!
Musi wa14 June 2007, Hofisi yePosvo yokuEstonia yakabudisa chitambi chetsamba chiri kuratidzwa kurudyi. Pavakachibudisa vakapa chiziviso chokuti: “Chitambi ichi chakabudiswa kuti tiyeuke vanhu vomuEstonia vakaurayiwa paitonga Stalin.” Kubva muna 1941 kusvika muna 1951, zviuru nezviuru zvevanhu vokuEstonia zvakamanikidzwa kusiya misha yazvo nenyika yazvo.
“TINODZIDZA pane zvakaitika kare.” Chirevo ichi chinozivikanwa chaizvo muEstonia, uye mune dzimwe nyika munewo zvirevo zvakafanana. Hatigoni hedu kuchinja zvakaitika kare asi tinogona kudzidza pazviri. Mambo weIsraeri yekare aiva akachenjera Soromoni akati: “Izvi zvose ndakazviona apo ndakanga ndichifunga namabasa ose anoitwa pasi pano paunoona vamwe vanhu vane simba vachitambudza vaya vasina.”—Muparidzi 8:9, Bhaibheri Rinoera.
Zvakaitika kuEstonia makumi emakore apfuura nokune dzimwe nyika dzakawanda dziri kuEastern Europe zvinonyatsoratidza kuti mashoko iwayo eBhaibheri ndeechokwadi. Utongi hwevanhu hwakaita kuti vanhu vakawanda vasina mhosva vatambure vachimanikidzwa kunogara kune dzimwe nyika dziri kure, vamwe vachinoitiswa basa rinorema sevasungwa.
Vanyori venhoroondo dzekare vokuEstonia vanoti vanhu vanopfuura 46 000 vokuEstonia vakatorwa munyika iyoyo duku vakaendeswa kune dzimwe nyika kubva muna 1941 kusvika muna 1951. Vakawanda vaitorwa nemhaka yokuita zvematongerwo enyika, vamwe nemhaka yokuti ndeverumwe rudzi uye vamwe nemhaka yemaonerwo avaiitwa munharaunda. Zvisinei, Zvapupu zvaJehovha zvaitorwa nemhaka yezvavanotenda.
Kutambudza Vashumiri vaMwari
Mumashoko akabudiswa neTartu University Press muna 2004, munyori wenhoroondo dzekare Aigi Rahi-Tamm akati: “Kubva muna 1948 kusvika muna 1951, Zvapupu zvaJehovha 72 zvakasungwa pamwe chete nevamwewo vanhu vavaiwadzana navo. Asi vanhu vakawanda vakatorwa usiku hwomusi wa1 April 1951, kwete munyika dzakadai seEstonia, Latvia, neLithuania chete, asiwo kuMoldova, Ukraine, neBelorussia.”
Gore ra1951 risati rasvika, Zvapupu zvaJehovha zvokuEstonia zvaishungurudzwa, zvaisungwa zvichibvunzurudzwa uye zvaiiswa mumajeri. Zvinoita sokuti chirongwa chitsva chokutorwa kwevanhu vachiendeswa kune dzimwe nyika, chaiva chokungoda kutsakatisa zvachose Zvapupu zvaJehovha muEstonia.
Chitambi chambotaurwa chakanyorwa kuti 1 April 1951. Nhamba iripo 382 ndeyeZvapupu nevana vazvo vakasungwa musi iwoyo. Nhamba yacho yaisanganisirawo vavakidzani nevoukama vakanga vasiri Zvapupu. Vanhu vakaswera vachisungwa munyika yose musi iwoyo. Hwava usiku vaya vakanga vasungwa vaisanganisira vakuru nevaduku, vakaiswa muzvitima zvaiva nematiroko aishandiswa kutakura mhuka, ndokuendeswa kuSiberia.
Ella Toom, * uyo aiva mumwe weZvapupu zvaJehovha, akanga aine makore 25 panguva iyoyo. Anotaura nezvekumwe kubvunzurudzwa kwaakamboitwa achiti: “Mumwe mupurisa akaedza kundityisidzira uye akandirambidza kuparidza. Pamwe pacho akandibvunza kuti ‘Unoda upenyu here kana kuti unoda kufa naMwari wako iyeye kuminda yokuSiberia?’” Zvisinei, Ella akaramba achiparidza mashoko akanaka asingatyi. Akaendeswa kuSiberia uye ikoko aingotamiswa-tamiswa kubva kune mumwe musasa kuenda kune mumwe musasa kwemakore anenge matanhatu.
Pamazana evanhu vakasungwa vasina kumbopiwa mukana wokutongwa paiva nemumwe mukadzi wechiduku ainzi Hiisi Lember uyo aiva Chapupu. Anotsanangura zvakaitika musi wa1 April 1951 achiti: “Vakangoerekana vauya usiku vakatiudza kuti: ‘Mangosara nehafu yeawa chete. Rongedzai zvinhu zvenyu!’” Usiku hwacho Hiisi nemwanasikana wake aiva nemakore matanhatu vakatorwa vakaendeswa kuchiteshi chezvitima. Chitima chacho chaiva mugweje uye chaimira pachiteshi choga choga chichitakura zvimwe Zvapupu. “Takabva tangoiswa mutiroko raitakuriswa mhuka. Zvakatoita zvakanaka kuti ndove yaivamo yaiva yakagwamba nechando, dai zvisina kudaro zvaizotiomera kumira pamusoro payo. Takaenda takatsvikinyidzana semhuka.”
Rwendo rwacho rwemavhiki maviri rwairwadza chaizvo. Vanhu vakanga vakaita kutsvikinyidzana uye makanga musina utsanana. Vakuru nevaduku vainyadziswa uye vaiitirwa zvakawanda zvaivadzikisira. Vamwe vaichema uye vairamba kudya. Zvisinei, Zvapupu zvaikurudzirana nokuimba nziyo dzokunamata uye zvaipanana zvokudya. Vasungwa vacho vakaudzwa kuti vaienda kumazivandadzoka.
Hiisi Lember nemwanasikana wake, Maaja
Hiisi anoyeuka kubatsirwa kwaakaitwa nevamwe vaainamata navo panguva iyi yakaoma. Anoti: “Pane chimwe chiteshi, chitima chedu chakamira pedyo nechaibva kuMoldova. Takanzwa mumwe murume achibvunza kuti taiva vanaani uye kuti taienda kupi. Takamuudza kuti taiva Zvapupu zvaJehovha zvokuEstonia uye kuti taisaziva kwataienda. Zvimwe Zvapupu zvaiva muchitima chaibva kuMoldova zvakanzwa zvataitaura. Vakabva vatikandira zirofu rechingwa nemichero yakaomeswa.” Hiisi anoenderera achiti: “Takabva taziva kuti Zvapupu zvaJehovha zvaitorwa munyika dzose dzaiva muSoviet Union zvichiendeswa kune dzimwe nyika.”
Vasikana vechiduku vaiva Zvapupu Corinna nemunin’ina wake Ene vakaparadzaniswa naamai vavo kwemakore anopfuura matanhatu. Amai vavo vaivawo mumwe weZvapupu zvaJehovha ndivo vakanga vatanga kusungwa ndokuendeswa kujeri kwavainoshandiswa zvakaoma. Vasikana vaduku vaviri ava vakazotorwa kumba kwavo ndokutinhwa vachipinzwa mutiroko remhuka usiku hwa1 April pakasungwa vanhu vakawanda. Corinna anotaura zvakaitika achiratidza kuonga achiti: “Muchitima chacho, mumwe mudzimai aiva Chapupu aiva nevana vaviri akati aizotitarisira ndokutivimbisa kuti taizogara pamwe chete semhuri naye nevana vake.”
Zvii zvakaitika pavakasvika kwavaiendeswa? Pashure pokusvika mugwenga rokuSiberia raitonhora, mangwana acho musika wevaranda wakatanga. Varume vaibva mumapurazi aiva pedyo vakauya kuzosarudza vashandi vokuti vavashandire mumapurazi avo. Corinna anoti: “Takavanzwa vachiitisana nharo vachiti: ‘Iwe watova nadhiraivha wetirakita yako. Uyu ndewangu,’ kana kuti, ‘Ndatotora vaviri vakura. Iwe torawo vakura.’”
Ene nemukoma wake, Corinna
Corinna naEne vaiva vasikana vakashinga. Vakazotaura kuti: “Taisuwa amai vedu zvokuti, uye taishuva zvikuru kumbundirwa navo zvakare!” Kunyange zvakadaro, vakaramba vachifara uye vachitenda zvakasimba muna Jehovha. Corinna anoenderera mberi achiti: “Zvakanakawo kuti amai vakanga vasingationi nokuti dzimwe nguva taishanda kunze kuchitonhora chaizvo tisina zvipfeko zvinodziya.”
Hapana mubvunzo kuti vanhu vasina mhosva vakatambudzwa nokudzvinyirirwa muEstonia nemune dzimwe nyika, uye Zvapupu zvaJehovha zviri pakati pevaitambudzwawo. (Ona bhokisi rakanzi “Kutambudzwa Kunotyisa.”) Pasinei nokubatwa zvisina kunaka nekutambura kwazvakaita, Zvapupu zvaJehovha zvokuEstonia zvichingori boka revanhu vanoita basa ravo uye vanofara.
Bhaibheri rinotiudza kuti Jehovha Mwari anovenga udzvinyiriri. Rinoti: “Munhu wose anoita zvinhu izvi, munhu wose anoita zvisina kururama, anosemesa Jehovha Mwari wako.” (Dheuteronomio 25:16) Kunyange zvazvo Mwari achirega zvinhu zvakaipa zvichiitika, munguva pfupi iri kuuya achaita kuti udzvinyiriri nouipi zvipere. Munyori wepisarema anoti: “Kwangosara nguva duku, munhu akaipa haazovipozve; uchanyatsotarira panzvimbo yake, asi haachazovipo. Asi vanyoro ndivo vachagara nhaka yenyika, uye vachafara kwazvo norugare rukuru.”—Pisarema 37:10, 11.
Ichokwadi kuti tine ramangwana rakanaka. Kunyange zvazvo tisingagoni kuchinja zvakaitika kare, tinogona kuita zvinhu zvichaita kuti tizorarama upenyu hwakanaka mune ramangwana. Swedera pedyo naMwari uye ona kuti ungazova sei mumwe wevanhu vachararama mune ramangwana rakanaka pakunenge kusisina zvinhu zvakaipa.—Isaya 11:9.
^ ndima 10 Nyaya youpenyu yaElla Toom iri muMukai! yaJuly 2006, pamapeji 26-30.
“Hatigoni kufungidzira . . . kutambudzwa kunotyisa kwakaitwa vanhu munyika . . . , mamiriyoni evanhu akavhiringirwa upenyu. Vanhu vaiurayiwa vasina kana kumbotongwa uye hapana kana chainyorwa nezvemafiro avo; vamwe vaitorwa vachiendeswa kune dzimwe nyika vachiiswa mumisasa yevasungwa uye vamwe vainyimwa kodzero dzavo nokuti vaishanda basa raionekwa serisina kunaka kana kuti nemhaka yokutarisirwa pasi. . . . Pafunge: Mamiriyoni evanhu akaurayiwa nevanhu vane zvavowo zvaivanetsa uye nokuti vaipomerwa zvenhema.”—VAMEDVEDEV, MUTUNGAMIRIRI WERUSSIA, OCTOBER 30, 2009.